G-Fatt အတွက် နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း
ဒီနေ့ကတော့ G-Fatt ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ အဆိုတော် G-Fatt ရဲ့ မွေးနေ့မှာတော့ ချစ်သူလေး နန်းဆုရတီစိုးက အခုလို မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်. နန်းဆုရဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းကြောင့်လည်း G-Fatt တစ်ယောက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်လို့နေပါတယ်.
ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ (ဒီနေ့) ကတော့ အဆိုတော် G-Fatt ရဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်. သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ မှာတော့ ချစ်သူလေး နန်းဆုရတီစိုးက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်း စကားပြောထားပါသေးတယ်.
'' မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ချမ်းမြေ့ပါစေ. အသက်တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် တိုးနေသလို အောင်မြင်မှုတွေ ပိုတိုးပါစေ ပျော်ရွှင်မှုတွေ အချစ်တွေ မေတ္တာတွေလည်း ပိုတိုးလာပါစေ ဒီနှစ်တွေမှာ ဘေးနားမှာအတူနေပေးပြီး ကောင်းတိုင်ပင်ဆိုးတိုင်ပင် အခက်အခဲများကို အတူတူဖြတ်ကျော်ပြီး ကူညီပေးခဲ့တာတွေ သင်ပေးခဲ့တာတွေ ဂရုစိုက်ပေးခဲ့တာတွေ စိတ်ညစ်ဝမ်းနည်းရချိန်မှာလည်း အတူတူမျှဝေခံစားပေးပြီး ပျော်ရွှင်စရာတွေ အတူတူကူဖန်တီးပေးခဲ့အတွက် ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ် '' လို့ ဆိုပါတယ်.
''လာမယ့်နှစ်သစ်တွေ နှစ်သစ်တွေမှာ ပိုတိုးလာမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်.နှစ်သစ်ကူးအပြောင်းမှာမွေးလို့ အပြောင်းအလဲမများပဲ ပိုဆန်းသစ်သော အချစ်တွေနဲ့သာအမြဲပြည့်စုံနေပါစေ Happy Birthday'' ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ မနက်စောစော ၁၂ နာရီ ၂ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ချစ်သူလေး နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းအပေါ် မွေးနေ့ရှင်ကြီး အဆိုတော် G-Fatt က Comment ကနေတဆင့် ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့ ဝမ်းသာပီတိဖြစ် တဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်.
'' မွေးနေ့ ကိတ်အတွက်ရော .. နားလည်ပေးမှုတွေအတွက်ရော .သဘောထားကြီးပေးမှုတွေ. သည်းခံပေးမှုတွေအတွက်ရော အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါ CS ရေ '' လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်.